ဘုရားနှစ်ဆူမှာ ဘုရားဖူးတွေ အေးချမ်းစွာသွားလာနိုင်ရေးအတွက် နေပူခံ ကျောက်ပြားလမ်းခင်း လှူဒါန်းပေးခဲ့တဲ့ ဟာသသရုပ်ဆောင် ဒါရိုက်တာ ခင်လှိုင် – Myanmar Update News
ဘုရားနှစ်ဆူမှာ ဘုရားဖူးတွေ အေးချမ်းစွာသွားလာနိုင်ရေးအတွက် နေပူခံ ကျောက်ပြားလမ်းခင်း လှူဒါန်းပေးခဲ့တဲ့ ဟာသသရုပ်ဆောင် ဒါရိုက်တာ ခင်လှိုင်
news uptodate | August 4, 2020 | Celebrities | No Comments
ဘုရားနှစ်ဆူမှာ ဘုရားဖူးတွေ အေးချမ်းစွာသွားလာနိုင်ရေးအတွက် နေပူခံ ကျောက်ပြားလမ်းခင်း လှူဒါန်းပေးခဲ့တဲ့ ခင်လှိုင်
ဇာတ်ပို့ဇာတ်ရံ ၊ ဒါရိုက်တာ တစ်ယောက်ဖြစ်သူ ဦးခင်လှိုင် ကတော့ မကြာခဏဆိုသလို အလှူအတန်း လုပ်လေ့ရှိသူပါ ။ နေ့ထူးနေ့မြတ်တိုင်းမှာ အလှူပြုလုပ်ရုံသာမက မိသားစုဝင်တိုင်းရဲ့မွေးနေ့တွေမှာလည်း အလှူကြီးအတန်းကြီး လုပ်လေ့ရှိသူပါ။
မကြာသေးခင်က မှော်ဘီခြံမှာ ဝါဆိုသင်္ကန်းကပ် စတုဒီသာကျွေးခဲ့ပြီး မနေ့ က ဝါဆိုလပြည့်နေ့မှာတော့ ခုနှစ်ရက်သားသမီးကို ရည်စူးပြီးပြုလုပ်ထားတဲ့ အလှူလေးတွေကို အောင်မြင်စွာ ရေစက်သွန်းချ အမျှပေးဝေခဲ့ကြောင်း ဖော်ပြလာပါတယ်။
မိဘကျေးဇူးဆပ် ရွှေကံဆင့် စေတီတော်မှာ ရင်ပြင်တော်အပြည့် နေပူခံကျောက်ပြားကို (၇)ရက်သား၊သမီးပရိသတ်များကို ရည်စူးပြီးလှူဒါန်းပေးခဲ့တဲ့အပြင် ပြင်ဦးလွင်မြို့ အင်းထိပ်ဦး ကျေးရွာမှာရှိတဲ့ (၇) ရက်သား၊သမီး တည်ထား ကိုးကွယ်တော်မူသော ဝတ်ကြွေးတော်ပြေ ကံ့ကော်တစ်ထောင်ဘုရား မှာလည်း နေပူခံကျောက်ပြားများ လမ်းခင်းလှူဒါန်းပေးခဲ့ကြောင်း သူ့ရဲ့အလှူလေးတွေကို မျှဝေခဲ့ပါတယ်။
ဒါ့အပြင် “ကျွန်တော်တို့မိသားစုပြုသော ကောင်းမှူများကို (၇) ရက်သားသမီး ချစ်မိတ်ဆွေအပေါင်းတို့အား အမျှပေးဝေပါတယ် ကောင်းမှုကုသိုလ်အားအညီအမျှရကြပါစေခင်ဗျာ ” ဆိုပြီးတော့လည်း မိတ်ဆွေသင်္ဂဟများနဲ့ ပရိသတ်တွေပါ ထပ်တူသာဓုခေါ်ဆိုနိုင်ဖို့ မျှဝေပေးခဲ့ပါသေးတယ်….
မွန်မြတ်လှတဲ့ စေတနာအရင်းခံပြီး လှူဒါန်းပေးခဲ့တဲ့ ဦးခင်လှိုင်တို့ရဲ့အလှူတွေအတွက် သာဓုခေါ်ဆိုပေးခဲ့ကြပါဦးနော်။ source – Khin Hlaing
unicode vaersion . . .
ဘုရားနှဈဆူမှာ ဘုရားဖူးတှေ အေးခမျြးစှာသှားလာ နိုငျရေးအတှကျ နပေူခံ ကြောကျပွားလမျးခငျး လှူဒါနျးပေးခဲ့တဲ့ ခငျလှိုငျ
ဇာတျပို့ဇာတျရံ ၊ ဒါရိုကျတာ တဈယောကျဖွဈသူ ဦးခငျလှိုငျ ကတော့ မကွာခဏဆိုသလို အလှူအတနျး လုပျလရှေိ့သူပါ ။ နထေူ့းနမွေ့တျတိုငျးမှာ အလှူပွုလုပျရုံသာမက မိသားစုဝငျတိုငျးရဲ့မှေးနတှေ့မှောလညျး အလှူကွီးအတနျးကွီး လုပျလရှေိ့သူပါ။
မကွာသေးခငျက မှျောဘီခွံမှာ ဝါဆိုသင်ျကနျးကပျ စတုဒီသာကြှေးခဲ့ပွီး မနေ့ က ဝါဆိုလပွညျ့နမှေ့ာတော့ ခုနှဈရကျ သားသမီးကို ရညျစူးပွီးပွုလုပျထားတဲ့ အလှူလေးတှကေို အောငျမွငျစှာ ရစေကျ သှနျးခြ အမြှပေးဝခေဲ့ကွောငျး ဖျောပွလာပါတယျ။
မိဘကြေးဇူးဆပျ ရှကေံဆငျ့ စတေီတျောမှာ ရငျပွငျတျောအပွညျ့ နပေူခံကြောကျပွားကို (၇)ရကျသား၊သမီးပရိသတျမြားကို ရညျစူးပွီးလှူဒါနျးပေးခဲ့တဲ့အပွငျ ပွငျဦးလှငျမွို့ အငျးထိပျဦး ကြေးရှာမှာရှိတဲ့ (၇) ရကျသား၊သမီး တညျထား ကိုးကှယျ တျောမူသော ဝတျကွှေးတျောပွေ ကံ့ကျောတဈထောငျဘုရား မှာလညျး နပေူခံကြောကျပွားမြား လမျးခငျးလှူဒါနျးပေးခဲ့ကွောငျး သူ့ရဲ့အလှူလေးတှကေို မြှဝခေဲ့ပါတယျ။
ဒါ့အပွငျ “ကြှနျတျောတို့မိသားစုပွုသော ကောငျးမှူမြားကို (၇) ရကျသားသမီး ခဈြမိတျဆှအေပေါငျးတို့အား အမြှပေးဝပေါတယျ ကောငျးမှုကုသိုလျအားအညီအမြှရကွပါစခေငျဗြာ ” ဆိုပွီးတော့လညျး မိတျဆှသေင်ျဂဟမြားနဲ့ ပရိသတျတှပေါ ထပျတူသာဓုချေါဆိုနိုငျဖို့ မြှဝပေေးခဲ့ပါသေးတယျ….
မှနျမွတျလှတဲ့ စတေနာအရငျးခံပွီး လှူဒါနျးပေးခဲ့တဲ့ ဦးခငျလှိုငျတို့ရဲ့အလှူတှအေတှကျ သာဓုချေါဆိုပေးခဲ့ကွပါဦးနျော။ source – Khin Hlaing
ကြေးဇူးရှငျမမေအေ့တှကျ မှေးနလေ့ကျဆောငျထပျပေးမယျ့ တဈထပျတိုကျအိမျလှလှလေးကို အစှမျးကုနျ ပွငျဆငျနတေဲ့ နဒှေေး
အသည်းကွဲပြီးသတ်သေဖို့လုပ်နေတဲ့ ပရိသတ်တစ်ယောက်အတွက် ခွန်အားပေးခဲ့တဲ့ ပန်ကိတ်ဒါဒါ